Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Qabiil iyo Qabyaalad waa kala labo.
Maqaal: Qabiil iyo Qabyaalad waa kala labo.
Posted by Daljir	/ June 5, 2018
Maqaal: Qabiil iyo Qabyaalad waa kala labo
Walaalayaal marka hore waxaad kala fahantaan Qabiil iyo Qabyaalad, hadii aynu sharax yar oo kooban ka bixino waa laba wax oo aad u kala duwan intabadana dadka qaar way isku khaldaan.
Qabiil Waa koox bulshada ka mid ah kuwaas oo wadaaga abtirsiinyo waxayna u sii qaybsamaan Jilibyo, Qoysas ugu danbayn waxaa kala baydha oo reero kala noqda laba Nin oo walaalo ah markay wiilal badan dhalaan ee ay wiilashiina caruuro sii yeeshaan.
Allaah (SW) isaga oo ka hadlaya qabiilka wuxuu yidhi: (Dadoow waxaan idinka abuuray lab iyo dhadig, waxaana idinka yeelnay shucuub iyo qabiilooyin si aad isugu aqoonsataan, ruuxase ugu sharaf badan Alle agtiisa waa ka idiinku dhawrsoon).
Qabyaalad Waa hab Soomaalidu cadaysteen oo ay mudo dheer ku soo dhaqmayeen kaas oo lagu amaanayo qoys ama qabiil, qabiil kalana lagu yasayo laguna caayayo oo lagu fogaynayo, marka qabyaalada la’oogayo waa marka larabo in qolo kale la dulmiyo laguna hamiyo jiritaanka qabiilka aad tahay oo qudha lagana diriro jiritaanka bulshada inteeda kale.
Qofka qabyaalada badan waa midka aaminsan inuu sax yahay wixii qabiil kiisa kasoo fula oo kali ah, dhibaatooyinka ay arintaasi abuurto waa dhibaato aad u wayn waxaana kamida arimahan soo socda:
1. Bulshada oo noqota umad dulmi iyo darxumo ku noolaata waligeed.
2. Jaahilnimada oo noqota mid lagu faano.
3. Xaqa iyo Cadaalada oo daciifnimo loo arko.
4. Bulshada oo aan waligeed is aaminin shakina kala qabta markasta.
5. Danta guud ee umada oo aan si daacada loogu adeegin.
Hadaba walaalayaal qabyaaladu waa isxaqirid, isdulmin, iyo sharciga umada oo lajabiyo taasina waa xaaraan cad oo cidii sidaas u dhaqanta ama ku fikirta uu ifka dulmi iyo duli ku noolaanayo akhirana cadaabta jahanama.
Waxaan umada soomaaliyeed gaar ahaan umada reer Ogadeniya ka codsanhayaa in ay iska daayaan qabyaalada iyo qolo qolaysiga kuna dadaalaan midnimadooda walaalnimo, taas ayay kujirtaa guusha akhiro iyo mida aduunba.